China Alucosun FR orinasa sy mpamatsy | Alucosun
Aluminium Composite Panels (ACP / ACM) dia vokatra marobe mitambatra ny kalitaon'ny metaly amin'ny plastika mora ampiasaina, vokatra mora azo nefa hentitra amin'ny vidiny somary ambany kokoa izy io ho an'ny fampiharana isan-karazany toy ny Facade, Roof, Ceiling ary ny fanavaozana ny rindrambaiko mitovy amin'izany na vaovao. fanorenana. Fitaovana manolotra fahafaha-manao tsy voafetra hamolavola ny nofinao.
Misy isan-karazany ny vokatra mifono aluminium, Alucosun® dia manolotra ho an'ity orinasa ity. Ny malaza indrindra dia ny vokatra mitambatra ACP / ACM dia raisinay tsara ho toy ny orinasa mahay mamorona vokatra kilasy an'izao tontolo izao. Fanampiny amin'ny kalitaon'ny vokatra atolotray ny sonianay dia ny fanoloran-tena manoloana ny fampanantenanay sy ny paikadin'ny asa fanompoana.
Alucosun ®Ny Aluminium Composite Panel dia fampisehoana tsara ho an'ny indostrian'ny fanamboarana manerantany. Ny takelaka Composite Aluminium dia heverina ho fomba hafa manorina lafiny maro amin'ny Panels Aluminium misy endrika maromaro izay mahatonga azy tsy manam-paharoa.
Alucosun FR®dia notsapaina ary neken'nyLabs malaza eran'izao tontolo izao. FR Panels Class A2 sy B (EN13501) voamarina fa ary ny pe core dia ny Class A (ASTME84) ary ny Class 0 sy 1 (BS476Part6, Part7). Ho fanampin'izany, Alucosun FR dia voamarina fa hanaraka ny NFPA285 sy ASTME-119.
Alucosun® ny vokatra mitambatra dia fitaovana maivana mavesatra raha oharina amin'ny ravin metaly metaly, vera na fika mitovy amin'izany hita amin'ny marika ankehitriny.
Alucosun - FR® ny takelaka dia misy fotony miaraka amina fitambarana manana mineraly tsy mora dorana mba hiantohana ny fenitra fiarovana sy fiarovana tsara kokoa an'ny indostria.
ACP - FR dia vokatra mitambatra misy ampahany betsaka amin'ny Panels core feno mineraly tsy azo vonoina izay mahafeno ny fepetra takiana amin'ny EN-13501 ho sokajiana amin'ny sokajy B. Ny vokatra mendrika hampiasaina ho cladding sy façade hananganana trano fonenana ivelany na tranobe ara-barotra miakatra ambany sy avo hitsangana. Ankoatr'izay dia mifanaraka amin'ny fepetra NFPA-285 sy ASTM E-119.
lafiny Unit Standard Available
sakany MG 1250, 1500 1000-2000
Length MG 3050 ≤8000
hateviny MG 4 2-6
Aluminium matevina MG 0.50 0.15-0.70
mason-tsivana Fomba fitsapana Unit sarobidy
Toetra ara-batana hateviny - MG 4
Gravity manokana - Kg / M.3 1900
Weight - Kg / M.2 7.5
Therm. Conductivity ASTM C 518 W / (Jereo Mk) 0,45
Therm. fanitarana ASTM D 696 X 10-6 / ° C 24
Fananana mekanika Faharetana amin'ny sintona ASTM E8 MPa N / mm2 49
2% Fanamafisana ny porofo ASTM E8 MPa N / mm2 44
Very ny famindrana feo Fihenan'ny tabataba ASTME413 STC 27
Ao amin'ny Panels Composite Aluminium dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famaritana ny fananan'ny afo ny trano ny fitaovana fototra. Raha tsy atao sorona ny iray amin'ireo fananana fototra ao aminy Ocean Panels ACP - A2, ACP-FR dia vokatra natao handrakofana ireo làlan'ny afo sy fiarovana manerana an'izao tontolo izao.
Fampitahana ny fahombiazan'ny afo
hateviny 4 4 4
Fitaovana mora may amin'ny Core <10% <30% <100%
Fenitra BS / EU EN13501-1 (A2 s1 d0) EN13501-1 (B s1 d0) -
Fitsipika Amerikanina NFPA 285 (Passed), ASTM E119 (Passed) NFPA 285 (Passed), ASTM E119 (Passed) -
Aostralia / Nouvelle Zélande AS / NZS 1530.3 (Tsy misy ignition) AS / NZS 1530.1 (Tsy misy ignition) -
Alemaina En1187 (lany) DIN41027 (lany) En1187 (lany) DIN41027 (lany) -
Emira Arabo Mitambatra EN13501-1 (A2 s1 d0) NFPA 285 (Nandalo) EN13501-1 (B s1 d0) NFPA 285 (Nandalo) -
Ny safidy isan-karazany sy ny famaranana dia mahatonga an'i Alucosun ACP ho safidy tianao amin'ny valopy fananganana. Fampirantiana isan-karazany, faharetan'ireo rafitry ny loko vita amin'ny kalitaon'ny famaranana sns .Ny fanaovana azy io dia mety amin'ny fampiharana amin'ny cladding na trano ara-barotra io, rafitra manana endrika miavaka miaraka amin'ny marika efa niorina. Alucosun ACP dia manolotra karazana famaranana mahazatra sy fanao amin'ny trano fandrakofana coil ao anaty trano. Alucosun ACP dia vita miaraka amin'ny rafitra hosodoko PVDF sy NANO amin'ny fizotry ny coil coil maharitra izay miantoka ny kalitao sy ny tsy fiatoana mifanaraka amin'ny famaritana AAMA 2605.
FEVENy loko dia fantatra amin'ny faharetany maharitra. Ny toetra simika sy ara-batana tena tsara ananan'ireo loko hosodoko ireo dia nekena tsara sy voaporofon'ireo mpampiasa sy mpanao maritrano manerantany nandritra ny efapolo taona lasa ary ankehitriny dia mbola mitohy isan'andro ihany izany.
NANO- PVDFdia rafitra fanadiovan-tena. Ny rafitra Paint toy izany dia manome palitao ambony mazava fanampiny miaraka amin'ny sombintsombiny NANO miampita amin'ny faran'ny PVDF; izay miantoka malamalama ambonin`ny. Ny faritra madio sy madio dia mahatonga ny fotaka sy ny vovoka hifikitra izay manome endrika madio foana ilay trano. Ny rafitra fandokoana PVDF sy NANO dia maharitra maharitra 15-20 taona.
ANODIZEDNy takelaka misy safidy isan-karazany dia misy ao Alucosun na izany aza dia voafetra amin'ny fetr'andro sy habe ® voafetra izany. Voajanahary voaaro amin'ny tontonana sosona anodized dia mateza mateza mateza dia manome antoka momba ny 30 taona.
PE sy HDPE Ny loko dia ampiasaina betsaka amin'ny fampiharana marobe noho ny haben'ny loko sy ny fiheverana ara-toekarena, ankehitriny ny taonan'ny fiantohana dia azo hitarina hatramin'ny 5 taona ka hatramin'ny 8 taona miaraka amin'ny karazana sarony samihafa.
Na dia ampiasaina amin'ny rindrina sy ny fampiharana dokam-barotra aza ny nentim-paharazana ampiasaina amin'ny takelaka Aluminium Composite, amin'izao fotoana izao dia be mpampiasa amin'ny sehatra maro toy ny haingon-trano, fampirantiana, fiara toy ny kaontenera kamiao, fiarandalamby, fiaramanidina, sambo, fanaka, singa maritrano sns satria ACP dia fitaovana mora azo. izay azo ampiasaina miaraka amin'ny sary an-tsaina ny mpamorona sy ny mpanao mari-trano mba hahitana sary an-tsaina ny zavaboary mahatalanjona. Ny fahaizan-javatra amin'ny fampiharana dia mandrisika antsika hikaroka sy hampivelatra ny famaranana tsy mahazatra mba handrehitra ny filan'ny fanomezana safidy tsy voafetra. Ny sasany amin'ireo famaranana lehibe hita ao amin'ny vokatra Aluminium dia toy ny eto ambany, na izany aza tsy voafetra eto; raha azonao an-tsaina hoe afaka mamorona azy isika.
※ mafy orina
※ ZAVATRA voajanahary - COPPER, ZINC, TITANIUM STAINLESS STEEL
Pvdf Propertites hosodoko
ALUMINIY PVDF COATING
S.No masontsivana Fitsipika fenitra Result
1 Gloss @ diplaoma 60 ASTM D 523 20-80
2 Formability (T-Bend) ASTM D1737-62 2T, tsy misy triatra
3 Familiana fiampitana-fiampitana NCCA II-5 Tsy misy safidy
4 Hamafin'ny-pensilihazo ASTM D3363 ≥2H
5 hidiran'i ASTM D3359 Tsy misy safidy
Dry Fomba 8 Tsy misy safidy
Wet 37.8 ° C, 24 ora Tsy misy safidy
Rano mangotraka 100 ° C, 20 min
6 Hatevina loko (μm) AAMA2604 25-36 μm dia miankina amin'ny sosona fametahana
7 Fanoherana mahery vaika ASTM D968-93 40 l / tapitrisa
8 Fanoherana ny simika ASTM D1308-87 Tsy misy fiovana
Fanoherana asidra ASTM D1308-87 Tsy misy fiovana
Fanoherana Alkali ASTM D1308-87 Tsy misy fiovana
Fanoherana fanoherana AAMA 2605-05 Tsy misy fiovana
9 Fitsapana toetrandro-o-metatra: ASTM D2244-93 Max. Fitaovana 5 aorian'ny 10 taona
Fitanana loko ASTM D523-89 Min 50% aorian'ny 10 taona
Fitanana gloss ASTM D4214-89 Max. Fitaovana 8 ho an'ny loko & 6
Fanoherana ny tsaoka Ho an'ny fotsy afaka 10 taona
10 Fanoherana famafazana sira ASTM B117-90 Pass (400hrs X5% NaCl)
11 Fanoherana ny hamandoana ASTM D2247-94 Tsy misy blaogy aorian'ny 4000 ora, 100% RH, 38 ° C
Ny habe sy ny toetran'ny fanasana trano dia miankina amin'ny fitaovana na rafitra, ny toerana misy azy ary ny toerana misy azy ao anatin'ny trano, ary ny haavon'ny fanadiovana takiana. Ny fikojakojana ara-dalàna dia asa ekena amin'ny ankapobeny fa ilaina hahatratrarana ny faharetana antenaina.
Araho ny fanoloran-tenan'ny mpanamboatra na ny mpamatsy mandritra ny fanadiovana, ny fitaovana hiditra amin'ny tohatra toa ny tohatra, ny staging, ny scaffold amin'ny finday, ny mpantsaka serizy na ny toa izany dia tokony omanina pad mba hiarovana ireo takelaka amin'ny fiantraikany. Ny fanadiovana tsy ara-dalàna izay miteraka fahasimbana amin'ny firakotra dia tsy ho voarakotry ny fepetra sy fepetra momba ny fiantohana ny vokatra.
Aza mampiasa solvent solika mahery.
Aza mampiasa alkali mahery, asidra mahery na fanadiovana mahery vaika. Raha nampiasaina ireo solvents sy mpanadio ireo dia mety hivonto, hikorontana na hikorontana ny loko.
Aza mampiasa rano be fanerena hanadio satria mety hiteraka fahasimbana amin'ny tombo-kase iraisana izany na hamafana ny loko. Tsy tokony hatao ny fanapoahana rano.
Aza afangaro ny mpanadio isan-karazany. Raha mila afangaro ireo mpanadio dia araho ny torolàlana momba ny fanamboarana azy.
Sorohy ny mari-pana tafahoatra hanadiovana ny tampon-tany. Ny velaran'ny hainandro migaingaina (eo amin'ny 40 ℃) dia mety hanafaingana ny fiasan'ny simika ary mety hanala ny rano amin'ny vahaolana mamela ny sisa sy ny tasy. Mifanohitra amin'izany, ny maripana ambany indrindra dia mety hanome voka-dratsy amin'ny fanadiovana.
Alucosun ®fiaraha-miasan'ny Wisdom Metal Composites Ltd izay mitondra vokatra ivelany miaraka amin'ny toeram-pamokarana malaza any Jiangsu, manana traikefa manan-karena mandritra ny roapolo taona eo amin'ny Indostrialy Panel Aluminium. Alucosun a®marika manome fahafaham-po ny filan'ny tontolon'ny arkitektika rehetra, nampiana fitaovana rehetra ao an-trano hahazoana antoka ny vokatra tsara sy ny fanoloran-tena. Manolotra vokatra tsara indrindra miaraka amin'ny fahalavorariana farany izahay; tratry ny fifangaroana tsara indrindra an'ny manam-pahaizana momba ny indostria, ny haitao farany ary ny milina be pitsiny. Fotodrafitrasa napetraka hamokatra mihoatra ny 10Million M2 isan-taona, miaraka amin'ny zavamaniry telo (3) ho an'ny Production Production isan-karazany, ny lokon'ny loko miaraka amin'ny laboratoara anatiny sy trano fitobiana.
Alucosun®miasa manerana an'i Atsinanana, Moyen Orient, Amerika Latina, Eropa ary Amerika. Ny biraom-paritra, ny mpiara-miasa aminay, ny maso ivoho ary ny mpaninjara manerana ny faritra dia ahafahanay mahafeno ny fepetra takianareo amin'ny fitaovan'ny arafisinay sy ny serivisy fanohanana na aiza na aiza ilainao.
Manaraka: Alucosun PE